Rabhoritari Zvishandiso Fekitori | China Laboratory Equipment Vagadziri uye Vatengesi
SHINVA inogona kupa akasiyana siyana makonzo ekurerera zvigadzirwa, kusanganisira IVC, akasiyana masize emakheji uye mapaki nezvimwe.SHINVA inogona kupa zvakagadziriswa masevhisi zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi.
Tafura yetafura Sterilizer
l Iine pulse vacuum function, iyo yekupedzisira vacuum inosvika pamusoro pe 90kPa, kirasi S haina basa rakadaro
BWS-M-G360 otomatiki yekunwa mvura bhodhoro yekuzadza muchina
Iyo isina kuchena mvura inorapwa nerabhoritari mhuka yekunwa mvura yekudzivirira sisitimu yakabatana nemushonga wemvura yekunwa yekuzadza muchina kuburikidza nepombi yehutsanana kudzivirira hutachiona hwechipiri hwemhando yemvura;
Iyo yehuku inonamira yega BSE-l yakanaka uye isina kusimba yekumanikidza huku yekuzviparadzanisa ndiyo yechizvino michina yakagadzirwa nekambani yedu yekuchengeta huku, SPF kuberekesa uye hutachiona hwezvemishonga miedzo.
BSE-IS yakateedzana mbeva uye gonzo rakapfava bhegi rinosarudzika chishandiso chakakosha pakuberekesa SPF kana chena mbeva negonzo munzvimbo yakajairika kana chinodzivirira nharaunda. Iyo inoshandiswa pakuberekesa uye majini ekugadzira mbeva negonzo.
Ipa akasiyana mhinduro yechigadzirwa kumhuka hombe, uye inogona kupa zvoga zvirongwa zvekubereka zvinoenderana nemamiriro chaiwo evashandisi;
BDS-H akateedzana eiyo diffusional hydrogen peroxide disinfector inoshandisa hydrogen peroxide gasi seyakauraya utachiona uye sterilization mumiriri. Inokodzera mavhairinisi magasi munzvimbo dzakapfigirwa, nzvimbo dzepaipi nemidziyo.
Iyo gonzo nembeva yekuvhiya iri yoga inokodzera nzvimbo dzemhuka dzemarabhabhurosi, masosi ekuparadzanisa, makambani ebiopharmaceutical, ekurapa uye ehutano mayuniti, nezvimwe.
BSP-C akateedzera Waste yekufuga ekurasa michina
Shandisa iyo yakavharwa michina cheni yekudhonza kana yekuvharira musimboti kutakura iwo matsva emubhedha kubva kuimba yekuchengetera kunzvimbo yekuwedzera, kana kutakura marara emubhedha kubva munzvimbo yekuunganidza kuenda kunzvimbo yepakati yekurapa,
BIST-WD akateedzana mhuka yekumwa mvura online michina yekudzivirira
Uchishandisa ultra-yakakwira tembiricha yekudzivirira mbichana, mhuka yekunwa mvura mukuita kwekukwereta kuburikidza nenzvimbo yepamusoro tembiricha uye nekuchengetedza imwe nguva yekudzivirira, kuuraya tupukanana tese tiri mumvura, kuwana mbichana yakakwana yemvura yekunwa yemhuka;
Imbwa uye yenguruve keji
Ipa akasiyana siyana zvigadzirwa mhinduro kumhuka hombe, uye inogona kupa otomatiki ekuuchika zvirongwa zvinoenderana nemamiriro chaiwo evashandisi
High-degree otomatiki kudzikamisa kumhanya mutengo.
Kudya kwekuwedzera, yekunwa mvura yekuwana uye fecal uye weti kurasa zvese zvinogadzirwa. Kushoma kwebasa uye nyore kushanda pamwe neyakaenzana yekuberekana.